Tangram Smart Dot: pointer laser ary stylus amin'ny vokatra iray | Vaovao IPhone
Tangram Smart Dot Fitaovana mahaliana ho an'ireo rehetra manao famelabelarana imasom-bahoaka matetika. Amin'ity fitaovana ity dia hanana a pointer laser izay mifandray amin'ny jack 3,5mm an'ny iPhone ary fehezin'ny fampiharana Smart Dot. Ny laser pointer izay ampifandraisintsika amin'ny iPhone dia mandeha mivantana avy amin'ny ankehitriny nalaina avy amin'ny jack 3,5mm, noho izany dia tsy ilaina ny bateria na bateria ivelany.
Ankoatry ny fahafahany mampihetsika sy mamono ilay tondro laser, Smart Dot dia manome antsika ny fahafahan'ny fifandraisana mivantana amin'ny solosaina mankany fehezo ny fampisehoana PowerPoint na Keynote anao amin'ny iPhone. Manana faritra kely amin'ilay rindranasa koa izahay miaraka amin'ny trackpad ahafahantsika mitantana ny kursor mouse totozy.
Ny Tangram Smart Dot dia hamidy amin'ny karazany roa. Ny iray amin'izy ireo dia ho avy miaraka amin'ny stylus capacitive ary ny endriny hafa dia ho tsipika izay ahafahantsika mitondra ny pointer laser mifatotra amin'ny kitapo rehetra.
Mazava ho azy, ny mpampiasa Smart Dot rehetra dia ho afaka misintona ny fampiharana an'ity fitaovana ity maimaimpoana amin'ny App Store:
Fampahalalana bebe kokoa: Tangram
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fitaovana IPhone » Tangram Smart Dot: pointer laser ary stylus amin'ny vokatra iray
Toa safidy tena mahaliana ahy izany saingy… sy ny vidiny?
Mbola tsy nahita na inona na inona momba an'io aho. Hitady zavatra hafa kely aho. fiarahabana
Manitsy aho mba hilaza aminao fa tsy tonga amin'ny fanambarana an-gazety ny vidiny, fa ny aprily kosa dia havoaka amin'ny volana aprily.
Mpamorona dia hoy izy:
Ao amin'ny iray amin'ireo hevitra dia milaza fa ny fonosana fototra, izay misy:
-Ny mpanondro 3.5 jack
-Ary ny fehy
Vidiny: 49800 35 no nahazo ny vidiny izay XNUMX XNUMX € na -
Avy eo ny fonosan'ny kapila 4 dia mitentina 9900 won izay manodidina ny € 6 + na -
Ary farany, ny tadiny dia lasa hatramin'ny 9900 won izay manodidina ny € 6 + na -
Mamaly an'i Crever
Piel Frama, tranga vita tanana vita tanana avo lenta ho an'ny iPhone